Wakiilka Paulo Dybala oo hoos u dhigay in laacibku uu ku biirayo kooxda… – Gool FM
Wakiilka Paulo Dybala oo hoos u dhigay in laacibku uu ku biirayo kooxda…
(Turin) 26 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Paulo Dybala ayaan u dhoweyn inuu ku beiro naadiga Paris Saint-Germain, inkastoo la isla dhex marayo bixitaankiisa ku aaddan mustaqbalkiisa, sida laga soo xigtay wakiilka xiddigan reer Argentine.
PSG ayaa si xoog leh loola xiriirinayay laacibkan reer Koonfurta Ameerika, iyadoo isku diyaarinaya inay aqbalaan bixitaanka Neymar, kaasoo la sheegay inuu dhexda u galay dagaal culus oo u dhexeeya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
Yeelkeede, Jorge Antun kaasoo wakiil u ah Dybala ayaa soo jeediyey: “Ma jiraan safarro dhow oo la qorsheeyay oo ku aaddan Paris, iyadoo 25-jirkan uu aad u jecel yahay Juve xilligan.”
Antun ayaa sidoo kale u sheegay Tuttosport: “Wuxuu u baahan yahay kaliya inuu waqtigiisa ku riyaaqo, ma ogin waxa mustaqbalka dhici kara.”
Dhanka kale, wakiilka ayaa sidoo kale ku eedeeyay Manchester United iyo Tottenham Hotspur inay ku guul darreysteen inay heshiisyo amaah ah la gaaraan xiddiga uu wakiilka u yahay intii lagu jiray suuqa kala iibsiga xiddigaha Ingiriiska.
Dybala waxa uu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii kooxdiisa Juve ee furitaanka horyaalka Serie A oo ay la ciyaareen habeenkii Sabtida Naadiga Parma.
Taageerayaasha Manchester United oo xiddig aan ahayn Pogba iyo Rashford u doortay rigoore-tuuraha koowaad ee kooxdooda!
Neymar Jr oo fariin cusub u diray kooxda Barcelona